Ogaden News Agency (ONA) – Xisbi Kusheega Axmaarada Ee ANDM oo Labo Ukala Jabay.
Xisbi Kusheega Axmaarada Ee ANDM oo Labo Ukala Jabay.
Posted by Dulmane	/ September 24, 2017
Wararka nagasoo gaadhaya magaalada Bahardar ee xarunta Gobolka Axmaarada ayaa sheegaya in lagu kala dhaqaaqay kulan baryahan halkaas uga socday xisbi kusheega ANDM ee bahwadaagta la ah kooxda TPLF ee talada wadanka xooga kuhaysata.
Sida xogta aan kuhelayno waxaa fashil kudhamaaday shirar maalmihii lasoo dhaafay magaalada Bahardar uga socday Golaha Dhexe ee xisbiga ANDM ee sheegta in uu matalo shacabka qoomiyada Axmaarada.
Kulanka ayaa lasheegayaa in lagu kala kacay kadib markii xubnihii Golaha Dhexe ee xisbigu ay 2 ukala jabeen kuwaas oo qayb kamid ah ay xambaarsan tahay fikirka kooxda TPLF halka qaybta kalana ay huwan tahay hadafka qoomiyada lagumaysto ee Axmaarada.
Warka ayaa intaas kudaraya in qaybta kuhadlaysa afka kooxda TPLF ay soo jeediyeen in waxbadan laga badalo dhaqanka qoomiyada Axmaarada ee kusalaysan raadinta madax banaanida, sidoo kale guruubkan ayaa qaba in xisbiga ANDM uu kufashilmay wax kaqabadka kacdoonada qoomiyada Axmaarada ee mudada dheer socda.
Garabka taabacsan fikirka kooxda TPLF ayaa sidoo kale soo jeediyay in la aqbalo soojeedintii kooxda TPLF ee ahayd in xilka qaadis lagu sameeyo taliyaha ciidanka Booliiska ee Gobolka Axmaarada oo siwayn uga soo horjeedsaday in dhaqaale lagu raro dadka Tigreega ah ee kudhaqan Gobolka Axmaarada lakeeno.
Dhinaca garabka kuhadlaya codka shacabka ayaa kudooday in aan lagu dhaqmi karin talooyinka dibada ka imaanaya isla markaana kooxda TPLF ay ku ekaato wada shaqaynta guud, waxayna guruubkan kudoodayaan in loobaahan yahay in laraadiyo xaqa shacabku ay leeyihiin.
Sidoo kale garabka fikirka shacabka taageersan ayaa gaashaanka udaruuray in xilkaqaadis lagu sameeyo taliyaha Booliiska ee Gobolka Axmaarada waxayna arintaas sabab uga dhigeen in uusan lahayn wax dambi ah oo xilka lagaga qaado.
Gabagabadii shirkii Golaha Dhexe ee xisbiga ANDM ayaa fashil kusoo dhamaaday, waxayna labada garab kala tageen iyagoo is haaraamaya.